Momba anay - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Dongguan Walley Masinina Teknolojia Co., Ltd. dia naorina tamin'ny volana Jona 2002, tsy miankina amin'ny departemantan'ny tsena any ivelany qianrunshun. Any Changping Town, Dongguan City, faritanin'i Guangdong, Sina no misy azy. Izy io dia orinasa teknolojia avo lenta manana fahaiza-manao matanjaka amin'ny fikirakirana ny milina, ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny famokarana ary ny famolavolana radiatera sy ny fampandrosoana. Ny fizotrany famokarana lehibe dia ahitana ny milina mazava tsara ao amin'ny CNC, ny fanodinana lathe CNC, ary ny fametahana stamping, ny riveting, ny fivoriambe, sns. Ny vokatra tafiditra amin'izany: ny fanodinana kojakoja ara-pahasalamana, ny fanodinana ny fizarana fitaovam-pifandraisana, ny fanodinana ny faritra misy ny fiara, ny fanodinana ireo vokatra miaramila, ny fanodinana ireo faritra mpampifandray, ny radiator fanodinana modely sy saha hafa.
Miaraka amin'ny serivisy avo lenta sy laza tsara, Wally dia mivoatra tsy tapaka amin'ny indostrian'ny milina mazava tsara ao amin'ny CNC. Tsy vitan'ny hoe manatsara hatrany ny fanodinana faritra tsy mahazatra, fa mandroso be koa amin'ny fikirakirana modely, fanodinana vokatra radiator, fanodinana fitaovana, sns.